Our Library: April 2010
မြစ်ကျဉ်းသုံးခု - ဧထက်၊မနော်ဟရီ၊ စမ်းသီတာ
မြန်မာကဗျာလောကမှာ ကဗျာဆရာ အုပ်စုတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါက တက္ကသိုလ်တွေမှာ စုဖွဲ့ထားတဲ့ကဗျာဆရာအုပ်စုလေးဖြစ်တဲ့ ရာစုသစ်မြစ်ကျဉ်းအဖွဲ့ကို သိကြမှာပါ။
အခုမြစ်ကျဉ်းသုံးခုမှာ ...သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ၁၉၉၀ နဲ့ ၂၀၀၈ အတွင်းက ကဗျာဆရာသုံးယောက်မြင်ခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာကြီး ...ဒါမှမဟုတ် ... သူတို့တွေ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခဲ့တဲ့ .... မြေနိမ့်ဒေသများ ....။
ိကိုယ်မောင်မြင့်ရဲ့ လှပတဲ့ လက်ရေးနဲ့အတူ .... စီးဆင်းသွားတဲ့ ရေးစီးကြောင်းတွေ .... သုံးခုစလုံး သူ့အရှိန်နဲ့ သူ့ဂီတနဲ့ ....လှပနူးညံ့စွာပါပဲ။
Author- Aye Htet (ဧထက်), Manorhary(မနော်ဟရီ), San Thida(စမ်းသီတာ)
Published Date- 2009 Jan
Price -၁000 kyats
No. Of Pages-60
၄၃။Dialouges & Question
၄၅။ချစ်သူကိုဖြောင့်ချက်ပေးဖို့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ခြင်း
Posted by Zephyr at 8:03 AM No comments:
Labels: poem, စမ်းသီတာ, မနော်ဟရီ, ဧထက်
ခိုင်မြဲကျော်စွာ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား ကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းကဗျာဆရာနဲ့ အပျော်တမ်း Hip Hop ဆိုတဲ့လူငယ်လေးနဲ့ဆိုရင် အပျော်တမ်း Hip Hopဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုပဲ လူသိများပါတယ်။ ကဗျာဆရာဘ၀ဆိုတာ .... သိပ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ အချည်နှီးဖြစ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်လေမလား ... ။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းမှာဝတ်တဲ့ T-shirt တစ်ထည်ထက် ဈေးနည်းနည်းပေါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကတော့ ... သေရင် ပါမယ်ဆိုတဲ့ ဒါန သီလတွေနဲ့ တစ်တန်းထဲပဲ ...။
ခိုင်မြဲကျော်စွာဟာ ရိုးရင်းတဲ့ကဗျာလေးတွေထဲမှာ အတွေးလေးတစ်ချို့သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ပစ်ထည့်တတ်တဲ့ကဗျာဆရာဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာတွေကနေတစ်ဆင့် သူမြင်ရတဲ့လောကကြီးကို အရင်းအတိုင်းပြန်တင်ပြပါတယ်။ မကြာမကြာ သူဟာ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောနေတာလား .. ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက ခေတ်ရဲ့ clone လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ ထိုနည်းတူ အလားတူပစ္စည်းများပဲလားလို့ တွေးမိစေတတ်တဲ့ သူ့ကဗျာတွေကို အေးအေးဆေးဆေးလမ်းမှာ ... လှလှပပ ပြောပြသွားပါတယ်။ သူနဲ့ အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း သူ့လမ်းလေးဟာ ... ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းလေးဖြစ်နေတာကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခံစားလိုက်ကြပါစို့ရဲ့လေ။
Author- Khaing Mye Kyaw Zwar (ခိုင်မြဲကျော်စွာ)
Publisher- မိုးကျော်အေး စာအုပ်တိုက်
Published Date- 2009 May
Translator- Aung Htape
Price -၁၈00 kyats
No. Of Pages-163
၁။ သဘောကောင်းသူ လူငယ်လေးရဲ့ ၂၀၀၄ မှတ်စု
၂။လမ်း ၃၀ ထိပ်က ခရမ်းသို့
၉။ကျော့ကျော့ခိုင်(သို့မဟုတ်) နောက်ပြန်ဆုတ်မိတဲ့ မီးရထား
(p.s Thank you mom for this poem book)
Posted by Zephyr at 4:42 AM No comments:
Labels: poem. ခိုင်မြဲကျော်စွာ
ဇေယျာလင်း -တကယ့်ဘ၀ (စကားပြေကဗျာများ)
အရင်ခေတ်က ကဗျာတွေထဲမှာ ဘောလယ်တွေရေးပြီးလွမ်းနေတာတွေ .... ပျို့တွေ၊ရတုတွေနဲ့ နုရွလှပနေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာ သိပ်ခံစားလို့မရတော့ပါဘူး။ အနည်းဆုံး ကျွန်တော်ကတော့ ခံစားလို့မရတာ့ပါဘူး။ သုစိပုဘာ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို အစကပြန်သင်မယ်ဆိုလည်း နားမထောင်ချင်တော့ပါဘူး။ မဟာဒုက္ခတွင်းဆုံးကျဆိုတာလေးကို ခပ်ဖွဖွရွတ်ရင်း ခံစားနေတတ်တဲ့လူကြီးသူမကြီးတွေ ရှိကောင်းရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သုံးချက်စည်တော် ရိုက်ဆော်ညှင်းတယ်လေး ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။ မ၀ယ်ဘူး မယ်ခူးတဲ့ဖက်စို ...မီးမကူနေပူမှာမကင်အားလို့ ထားရတယ် အိပ်ရာအောက်မှာ မင်းသောက်ဖို့ကို ဆိုတာကြီးကိုလည်း မခံစားတတ်ပါဘူး။ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ကဗျာထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ မြကန်သာ တောင်ကျချောင်းတေးဆိုရင်လည်း မခံစားရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကို ရှေးကဗျာတွေမရောက်တော့ပါဘူး။
ကဗျာရဲ့ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုမှာ ခေတ်တွေရှိပါတယ်။ ခေတ်တစ်ခုထဲက ကဗျာနဲ့လူတွေဟာ ခေတ်ရဲ့ကဗျာကို အကောင်းဆုံးနားလည်ကြပါတယ်။ ကဗျာကလည်း ခေတ်နဲ့အတူစီးဆင်းလာပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါ ကဗျာက ဒဿနလည်းပြောမယ် ...။ ခင်များမက်တဲ့ အိမ်မက်တွေ သူလည်းမက်ဖူးကြောင်း ... သူလည်းအပြစ်သား မဖြစ်ချင်လို့ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ကွက်လပ်ထားလိုက်ကြောင်း ကဗျာတွေကပြောမယ်။ သူကချည်းပြောနေတာကြာလာတဲ့အခါ ကဗျာက ပြန်နားထောင်တယ်။ ခင်များပြောရမယ့် အလှည့်တဲ့ ...။ ကဗျာက အတူတူဆွေးနွေးမယ် ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ ကဗျာက နိမိတ်ပုံတွေနဲ့ စနစ်တကျ စီစဉ်ထားထားတွေကို ပျင်းတဲ့အခါ စနစ်တကျ Chaos ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါကို ဘာသာဗေဒကဗျာတွေထဲမှာတွေ့ရတယ်။ အခုကဗျာကတော့ Prose အမျိုးအစားပါ။ လေ့လာမှုအားကောင်းတဲ့ ဇေယျာလင်းဟာ ကမ္ဘာ့ကဗျာနဲ့ မြန်မာ့ကဗျာကို ပေါင်းစပ်တီထွင်ပြီး ကဗျာကို ဆန့်ထုတ်ပြီး ကဗျာ အတူဆွေးနွေးတဲ့ ကဗျာဖတ်သူလူတန်းစားတစ်ရပ်ကိုတောင်းဆိုလာပါတယ်။
ကဗျာတွေကို ဖတ်ရင် ပထမဆုံးဝိသေသက လွယ်လွယ်နဲ့ နားလည်မယ်လို့ သိပ်အများကြီးမမျှော်လင့်ထားပါနဲ့ဆိုတာပါပဲ။ နာမည်ကျော် မုတ်ဆိတ် ကဗျာနဲ့ အတူ ထင်ရှားလာတဲ့ ဇေယျာလင်းဟာ သူယုံကြည်တဲ့ အနုပညာနဲ့သူ့ဘာသာသူရှေ့ဆက်နေပါတယ်။ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာတွေကိုလည်း ဆက်လက်ရေးသားဖြန့်ချိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ဇေယျာလင်း ကဗျာတွေကို သိပ်ကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အားထုတ်မှုကိုတော့ ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးနေမိပါတယ်။ သမားရိုးကျတွေများတဲ့ အသိုင်းအ၀န်းထဲမှာ ဇေယျာလင်းဟာ အသွားပြောင်းပြန်ဓားတစ်လက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စိတ်ကို ဖွင့်လှစ်ကြည့်ဖို့ သိပ်တောင်းဆိုလွန်းတဲ့သူ့ကဗျာတွေကို ခင်များကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ် ...။ ဒါပေမယ့် မဖတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။
Prose ကဗျာတွေကို သဘောကျတတ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သား Prose ကဗျာရေးသူတစ်ယောက်ကို လေးလေးစားစား ချီးကျူးနေမိပါတယ်။
(ကဗျာဆရာမို့လို့ ဦး၊ကို၊ဒေါ်၊မတွေ တပ်ပြီးမရေးပါဘူး။ အပြင်မှာတော့ ဆရာဦးမြင့်အောင်ဖြစ်စေ၊ ဆရာဖြစ်စေ ခေါ်ရမယ့်သူမျိုးပါ။)
Detailed Classification- Prose Poem (စကားပြေကဗျာ)
Author- Zayar Lin (ဇေယျာလင်း)
Title- တကယ့်ဘ၀ (စကားပြေကဗျာများ)
Publisher- နှစ်ကာလများ စာပေ
Published Date- 2009 Aug
No. Of Pages-28
၁။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင် မနက်ဖြန်ကို မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး
၂။ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ လေဟာနယ် နည်းနည်းယူမယ်နော်
၇။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ တိတိကျကျ တစ်ပြားမလျှော့
Posted by Zephyr at 3:34 AM No comments:
Labels: poem, prose poem, ဇေယျာလင်း